Ukwethulwa kwe-mesh yokuhlobisa eyalukiweyo eyi-crimped
Sinezinhlobonhlobo zezitayela ze-weave kanye nosayizi bezintambo ukuhlangabezana nezikhuthazo ezihlukene zokuhlobisa. I-Architectural weaving mesh isetshenziswa kabanzi ngaphakathi nangaphandle kwezakhiwo. Ayigcini nje ngokuba nezici eziphakeme kakhulu kunezici zokuqala zezakhiwo, kodwa futhi nokubukeka okuhle, kulula ukudonsa ukunaka kwabantu, bayanda abaklami bokuhlobisa bezakhiwo.
Imiklamo yangokwezifiso kanye nokucaciswa kwamukelekile futhi sihlala sibheke ngabomvu imibuzo yakho.
Ukucaciswa kwe-mesh yokuhlobisa yokwelukwa kwe-crimped
Ububanzi be-warp: 1mm
Ububanzi be-Weft: 1x4mm
Ukuphakama kwe-Warp: 20mm
Ukuphakama: 8 mm
Isisindo: 5.3 kg/m2
Indawo evulekile: 36.4%
Izinto: i-aluminium, ithusi, ithusi, insimbi engagqwali, i-carbon steel, njll
Izici: i-flame retardant, amandla aphezulu, ihlala isikhathi eside, kulula ukuma, kulula ukuyinakekela
Igama Lemikhiqizo I-Decorative Crimped Woven Wire Mesh
Okubalulekile Insimbi engagqwali, insimbi yensimbi, ithusi, ithusi, i-aluminium, ama-alloys e-aluminium, njll.
Ububanzi bentambo 0.5 mm - 4 mm
Usayizi wembobo 3 mm-20 mm
Indawo evulekile 45% - 90%
Isisindo 1.8kg/m2 – 12kg/m2 (kuye ngokuthi umumo nezinto ezikhethiwe)
Ukwelashwa kwendawo I-Plating yokuhlobisa, I-Physical Vapor Deposition, i-US10B kanye ne-US10A Qeda, Ukumbozwa Kwempushana, Ukudlula, njll.
Imibala Ithusi, Ithusi, Ithusi Lasendulo, Ithusi Lasendulo, I-Nickel, Isiliva, Igolide, njll.
Indlela yokukhiqiza ye-crimped weven woven decor ye-architectural mesh
insimbi engagqwali enezikhala zikathayela isebenzisa indlela yokugoba ngaphambili kanye nokwenza indlela yokweluka, ehlukaniswe yaba ukuluka okukhiyayo, ukwaluka okunezinhlangothi ezimbili, ukwaluka kukathayela okuyindlela eyodwa, ukwaluka kwendiza ezinhlangothi ezimbili, ukuluka kukathayela okunezindlela ezimbili kanye nokuluka imbobo engunxande. I-Crimped steel wire mesh inezici zamandla okuluka aqinile, ukuluka okuqinile kanye nenetha elifanayo.
Indlela yokukhiqiza ingahlelwa ngokuzenzakalelayo. Ngemva kokuluka, indawo engaphezulu ingapholishwa ukuze kuzuzwe umphumela wesibuko, noma ingenziwa ibe phuzi neminye imibala. Kuhle futhi kunomusa, kulungele ukwakha i-facade, i-partition, uphahla, i-sunshade, i-balcony, i-corridor, njll. Umhlobiso wangaphakathi wezinga eliphezulu uhlanganisa umhlobiso wekholomu, i-roller shutter, i-stair passage, ihhotela, ihhovisi, ihholo lombukiso, isitolo, njll.
Ukusetshenziswa kwe-crimped nokwelukiweyo komhlobiso we-architectural mesh
I-elevator cage mesh, i-cabine mesh, i-partition mesh, i-partition mesh, i-ceiling mesh, i-mesh yokuhlukanisa ikamelo, i-door mesh, i-stair mesh, i-mesh yokuhlobisa ekhaya.
Ukwelashwa okungaphezulu: ukwelashwa kwendawo ye-antique yethusi, ukwelashwa kwendawo ye-electroplating, ukwelashwa kwendawo yombala we-PVD, ukwelashwa kwendawo ye-powder.
Okwedlule: Ikhava ye-air conditioning ye-aluminium yangokwezifiso
Olandelayo: Ipuleti le-aluminium elinezimbobo lokuhlobisa odongeni lwamakhethini